I-Mudbrick Cottage - i-rustic ilizwe elinomtsalane
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguKasey
Indawo yokuhlala enobubele besilwanyana kwindawo entle yaseGippsland. Ngaphezulu kweyure enye ukusuka eMt Baw Baw naseMelbourne CBD.
I-Mudbrick Cottage likhaya elitofotofo kude nekhaya elinazo zonke izixhobo onokuthi uzifune. Sinobubele kwisilwanyana sasekhaya kwaye sinikezela ngamava elizwe kwindlwana eyakhiwe ngodaka, egcwele umtsalane werustic! I-cottage ihonjiswe ngezinto ezininzi zakudala kunye nezinto zakudala ezongeza kwimbali kunye nomtsalane we cottage.
UHLAZIYO: Kutshanje sifakele inkqubo yamanzi ashushu ashushu ngegesi kwaye sinokubonelela ngamanzi ashushu angenasiphelo ukuze sisetyenziswe ziindwendwe zethu.
I-Mudbrick Cottage likhaya elitofotofo kude nekhaya. Kukho igumbi lokulala eliphambili elisezantsi elijonge igadi encinci. Igumbi lokulala eliphakamileyo ukuya phezulu kwizinyuko ezijikelezayo lineebhedi ezimbini ezongezelelweyo zobukhulu bokumkanikazi.
Kukho indawo eyaneleyo yokuhlala yabantu abadala abathandathu kwindawo yokuhlala enkulu kunye nezihlalo zokutya. Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo linayo yonke into oyifunayo ukuze uhlale ukhululekile.
Hlala ufudumele ngokuthatha inzuzo ye-heater-fire fire ebusika okanye upholile ehlotyeni kunye ne-air conditioner ye-split system. Iinkuni zibonelelwa simahla.
Relax kwibhafu ye-spa yabucala ngeglasi yewayini kwaye uphumle kubomi obuxakekileyo bemihla ngemihla.
Indawo engaphandle inendawo yokuhlala kwiyadi yakho yabucala kunye ne-bbq yombane.
Izinja zakho ezizithandayo zamkelekile ukuba zihambe nawe ngexesha lokuhlala kwakho. Zivunyelwe ngaphakathi ngaphandle kokuba zigcinwe ngaphandle kwefenitshala ethambileyo. Nceda ukhumbule ukuba indawo engasemva ibiyelwe ngokuyinxenye kodwa ayivalwanga ngokupheleleyo.
Zonke iimpahla, ilinen kunye neetawuli zibonelelwa simahla.
4.72 · Izimvo eziyi-121
INeerim South yidolophu encinci yelizwe ebekwe kwiinduli ezintle zaseGippsland. Nangona incinci, ilokishi inazo zonke izinto eziyimfuneko onokuthi uzifune ngexesha lokuhlala kwakho kubandakanya iposi, ibha yobisi, ivenkile enkulu, ibhrarha, ikhemisti, ivenkile yehardware, iZiko lezonyango, isibhedlele, iikhefi, ipub, indawo yokubhaka kunye nokuqeshwa kweski. IWarragul ikwimizuzu eli-17 kuphela kwaye ineendawo zokuthenga ezibanzi. INeerim South ikwanesikhululo senkonzo seyure ezingama-24.
IMount Baw Baw ingaphantsi kweeyure zokuqhuba, apho ilizwe elinqumlayo kunye ne-skiing ezantsi, i-snowboarding & tobogganing inokonwabela.
Isitshixo se-cottage yakho siya kufakwa kwibhokisi yokutshixa ekufikeni kwakho.
Nayiphi na imibuzo ngexesha lokuhlala kwakho ndicela undithumelele umyalezo ngo-Airbnb kwaye ndiza kuyiphendula ngokukhawuleza
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Neerim South